Isoftware-Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi (Iphepha 2)
Zeziphi iiwebhusayithi ezinezona trackers zomntu wesithathu
Aba bazingeli bafumaneka phantse kuwo onke amaphepha ewebhu banoxanduva lokwazi izinto esizithandayo kunye nezinto esizikhethayo. Sebenzisa iVPN kuphela kwesisombululo sokuyiphepha.
Uyifumana njani kwakhona ifayile yeLizwi ecinyiweyo
Ukungayifumani ifayile kwikhompyuter yethu kunokuba ngumdlalo wokuqala ukuba asilandeli amanyathelo esikubonisa kuwo kweli nqaku ukuze sikwazi ukuyifumana ngokukhawuleza.
Uyifumana njani kwakhona ifayile esusiweyo ye-Excel
Ukuba sibe nelishwa lokulahlekelwa yifayile ye-Excel, kweli nqaku siza kukubonisa zonke iindlela ezikhoyo ukuze ukwazi ukuyifumana ngempumelelo.
Ungayisusa njani i-adware
Fumanisa ukuba yintoni i-adware kwaye singayisusa njani kwikhompyuter yethu okanye kwifowuni ephathekayo ngalo lonke ixesha ukunqanda iingxaki.
IMacOS Catalina ngoku iyafumaneka: yintoni entsha kunye nendlela yokuyifaka
Ukuba ufuna ukuhlaziya kwi-macOS Catalina ngokukhawuleza, kuya kufuneka ukhumbule ukuba zimbini iindlela zokwenza njalo: enye iyakhawuleza kwaye enye icothe
Imeyileli: Isixhobo sokwenza iphulo lakho lokuthengisa nge-imeyile
Fumanisa ngakumbi ngeMailrelay, isixhobo onokuthi wenze kunye nokulawula ukuthengisa nge-imeyile kunye nemikhankaso yeendaba yenkampani yakho.
I-EaseUS yokuBuyisa iNkcukacha ngeWizard Pro: Eyona nkqubo iphambili yokufumana kwakhona idatha elahlekileyo
Fumanisa ngakumbi nge-EaseUS yokuBuyisa iNkcukacha ngeWizard Pro, eyona nkqubo iphambili yokufumana kwakhona idatha kwikhompyuter yakho. Ungayifumana njani?
IMicrosoft inikezela ngendlela ethe ngqo yokufumana kwakhona igama eligqithisiweyo leHotmail ukuba iye yaqhekezwa kwaye umsebenzisi akanakungena ukuyiguqula.
Ukuba uthanda ukuzenzela ezakho iimpahla okanye ufuna ukuba nezakho iimpahla ezenzelwe wena, kukho inkqubo esebenza ...
Idphoto4you inciphisa ubungakanani beefoto zePasipoti ekwi-intanethi
Ngaphandle kokuchitha imali, ungalula ngokulula iifoto zobungakanani bepasipoti esekwe kwilizwe nakwizintlu ze ...
Amaqhinga okufumana okuninzi kwiSpotify kwi-smartphone yakho
Fumanisa olu luhlu lwamaqhinga onokuthi ufumane okuninzi kwisicelo seSpotify kwi-smartphone yakho. Spotify amaqhinga Android.
Ungayibhalela njani iPDF
Ukubhala kwi-PDF yinkqubo elula kakhulu. Fumana ezonaapps zibalaseleyo zeselfowuni kunye nekhompyuter ukuze uhlele kwaye ubhale amaxwebhu ePDF.
Fumanisa ngakumbi ngeRecoverit, eyona nkqubo ilungileyo kwintengiso yokufumana kwakhona idatha esuswe kwikhompyuter yakho ngendlela elula nesimahla.
dr.fone: Isixhobo sokuhambisa nokubuyisela i-WhatsApp kwi-iOS nakwi-Android
Fumanisa okungakumbi malunga dr.fone, isixhobo esikuvumela ukuba udlulise, ubuyisele okanye ukope izingxoxo zeWhatsApp phakathi kwefowuni ye-Android kunye ne-iOS.
Uyenza njani uxwebhu lwePDF
Ukuba ufuna ukwenza uxwebhu lwePDF, kuya kufuneka ulandele onke amanyathelo esikubonisa kuwo kwesi sifundo.
Ungayicinezela njani iPDF
Fumanisa zonke iindlela zokucinezela iPDF kwikhompyuter yakho, ukusuka kumaphepha ewebhu ukuya kwiAdobe Acrobat Pro ukujonga kuqala iMac.
Uluhlu lweeEmule 2021 zeeseva ezihlaziywe ngeeseva eziqinisekiswe ngokupheleleyo. Fumanisa ukuba ungayigcina njani i-eMule yakho ihlaziywa ngokuzenzekelayo okanye ngesandla.
Ungayikhulula njani indawo kwi-iCloud
Ukuba ufuna ukufumana indawo yasimahla kwiakhawunti yakho ye-iCloud ngaphandle kokunyanzelwa ukuba uqeshe indawo engaphezulu, nazi ezinye iingcebiso zokukufeza.
Ungazicimi kanjani iifayile ze rar
Ukuba ujonga isicelo sokuvula iifayile zakho kwifomathi yeRAR kwiPC yakho, kwi-Mac, kwi-iPhone okanye kwi-Android, siya kukubonisa ukuba zeziphi ezizezona zibalaseleyo.
Uyijikeleza njani ividiyo ngeVLC
IVLC ngomnye wabadlali ababalaseleyo esinabo namhlanje kulo naliphi na iqonga, ukusukela ...
Uyenza njani ikopi yogcino
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungazenza njani na iikopi ze-smartphone, ikhompyuter okanye ithebhulethi yakho, kweli nqaku siza kukunika zonke iindlela ezikhoyo.
Uhamba njani usuka kwiPDF uye kwiJPG
Ukuhamba usuka kwiPDF uye kwiJPG yinkqubo elula kakhulu engafuni lwazi lubanzi ngesihloko. Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani.
Ungazikhuphela njani iividiyo zikaYouTube ngaphandle kweenkqubo
Ukukhuphela nayiphi na ividiyo kwiYouTube, akukho mfuneko yokusebenzisa nasiphi na isicelo somntu wesithathu, kuba singayenza kwisikhangeli sethu
Yintoni iGoogle Drayivu
Ukuba awazi ukuba yintoni iGoogle Drayivu, kweli nqaku sikubonisa ukuba yintoni, yeyantoni kwaye nayo yonke into onokuyenza ngayo.
IHuawei ibhengeza i-EMUI 9.0, olona hlaziyo lukhulu kwinkqubo yokusebenza esekwe kwi-Android
Inkampani yaseTshayina iyaqhubeka nokuba phakathi kweempawu eziphambili zehlabathi kwaye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ikhuphe i-Apple ukusuka kweyesibini ...
Uyilungisa njani ifolda ye-Inbhoks ye-Outlook
Fumana indlela yokulungisa i-Inbox ye-Outlook ukuba uyayivula ngempazamo enxulumene neefayile ze-PST kugcino lwedatha.
Ukuphehlelelwa kweFirefox Quantum, olona tshintsho lukhulu lwakutsha nje lwesikhangeli seMozilla Foundation, lwangena emarikeni kunyaka ophelileyo, kunye neMozilla Foundation, engumnini webrawuza yeFirefox, isandula ukukhupha ingxelo ebhengeza umhla wokuphelelwa kwezandiso ezindala.
Uyifaka kwaye uyilawula njani imixholo kwiGoogle Chrome
Xa kuziwa kulungelelanisa iibrawuza zethu, uGoogle Chrome kuphela kwesikhangeli esivumela ukuba senze njalo, ubuncinci ngeminye imibala kunokufaka nokulawula imixholo kuGoogle Chrome ukwenza ngokwezifiso isikhangeli sethu yinkqubo elula kakhulu esineenkcukacha ezingezantsi.
I-Bose QC35II sele inenkxaso ye-Alexa
I-Bose QC35II sele inenkxaso ye-Alexa. Fumanisa ngakumbi ngezi headphone ezinokuthi ngoku zisebenzise umncedisi weAmazon
Baqulunqa isoftware ekwaziyo ukuba ucinga ntoni
Iqela labaphandi abavela kwiLebhu yaseKamitani yeDyunivesithi yaseKyoto ikwazile ukwenza isoftware ekwaziyo ukuba ucinga ntoni.
Cloud Player Player: Dlala umculo wasimahla kwi-iPhone yakho kwilifu
Cloud Player Player: Mamela umculo wasimahla kwilifu kwi-iPhone. Fumanisa ngakumbi ngalo mdlali mculo kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad.
Imowudi emnyama ngoku iyafumaneka kwi-Outlook. Sikubonisa indlela yokuyisebenzisa
Kuxhomekeka kwindlela oyisebenzisa ngayo ikhompyuter yakho, nokuba kusemini okanye ebusuku, kunye neemeko zokukhanya ezikungqongileyo, kusenokwenzeka ukuba inkonzo yemeyile kaMicrosoft, i-Outlook, isandula kufumana inqaku elitsha elinokuxatyiswa ngabasebenzisi abaninzi: imowudi emnyama. Sikubonisa indlela yokuyisebenzisa.
I-AI entsha kaGoogle iya kunceda ukulungisa iimpazamo zegrama
Le nguqulo intsha yeGoogle AI eya kuthi ikhutshelwe iGoogle Amaxwebhu, iya kuvumela abasebenzisi ukuba balungise ...
IFirefox iyakuthulisa isandi seevidiyo ezidlala ngokuzenzekelayo
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye, uye woyika xa ubona indlela isandi esingaqondakaliyo esiqale ngayo ukuphuma kwizithethi zakho, ngaphandle kohlaziyo olulandelayo lwesikhangeli seFirefox asizukudlala ngokuzenzekelayo iividiyo zewebhusayithi esizindwendwelayo enesandi esivulekileyo.
Utshintsha njani imiqolo ngeekholamu kwiMicrosoft Excel
Xa usenza naluphi na uhlobo lwegrafu (ngokusekwe kwidatha eguquguqukayo), ubalo olunokwenzeka, uphicotho-zincwadi, ukukhangela phakathi kwamaphepha ahlukeneyo, khangela ukuba ubusoloko uzibuza ukuba ungatshintsha imiqolo yeekholamu kwi-spreadsheet, impendulo ngu-ewe kwaye sikuxelele yenze.
Ungayitshintsha njani indawo kwifolda yokukhuphela kwiGoogle Chrome
UGoogle Chrome uye kwiminyaka yakutshanje esona sikhangeli sisetyenzisiweyo kwihlabathi, kwiqonga le-Android (lifakwe ngendlela) Ukutshintsha indawo kwifolda yokukhuphela kwikopi yethu yeGoogle Chrome yinkqubo elula kakhulu ukuba sinenkcukacha kule inqaku.
Ubukrelekrele bokusebenza buza kuyilo lwamachiza amatsha
Iqela leengcali ezivela kwi-MIT likwazile ukuphuhlisa iqonga lobukrelekrele bokuzenzela elinakho ukuvelisa amachiza amatsha.
I-RAMpage, ibug ebalulekileyo echaphazela yonke i-Android eyenziwe emva ko-2012
Iqela labaphandi lityhile into eyaziwa ngokuba yi-RAMpage, ukuxhaphaza okwaziyo ukusebenzisa ubungozi obuchaphazela izixhobo zeAndorid.
I-Instagram Lite isungulwe ngokusesikweni kumazwe aliqela
Siphakathi ehlotyeni kwaye ukusetyenziswa kwedatha kwezixhobo zethu kuyanda okanye kude kube nzima kuxhomekeka ...
UNvidia ngoku uyakwazi ukudlala nayiphi na ividiyo kwi 'Slow Motion'
UNvidia ubonakalisa uluntu ngokubanzi ubukrelekrele bakhe bokudlala obunakho ukudlala naluphi na uhlobo lwevidiyo kwiSlow Motion.
Umlawuli we-Android u-Andy unokufaka isoftware yemigodi ye-cryptocurrency
I-emulator ye-Android uAndy ufaka isoftware ye-cryptocurrency kuzo zonke iikhompyuter apho zifakelwa khona, nangona umphuhlisi eyikhanyelayo
Ukutshintsha kweNintendo kuyakuvumela ukonwabela iNetflix kunye neYouTube kungekudala
Ngokwokuvuza okutsha, zombini iNetflix kunye neYouTube zinokuza kutshintsho lweNintendo kungekudala.
I-Chrome ayizukuvumela ukufakelwa kwezandiso ezivela ngaphandle kweVenkile yeWebhu ye-Chrome
Izandiso zezinye zezona zinto zilungileyo eziye zafunyanwa zizikhangeli kwiminyaka yakutshanje, nangona abafana ...
I-Apple ilungisa isiphene sokhuseleko lwe-macOS seminyaka eli-11
U-Apple usandula ukubhengeza ukuba ekugqibeleni basombulule ingxaki enkulu yezokhuseleko ebikhona kwi-macOS ngaphezulu kweminyaka eli-11.
Le yimigaqo yokuziphatha eza kusetyenziswa nguGoogle ukuphuhlisa iinkqubo zayo zobukrelekrele
UGoogle usandula ukubhengeza ukuphunyezwa kweseti entsha yemigangatho yokuziphatha abaza kuyilandela xa besenza ubukrelekrele bokuzenzela.
Zonke iindaba kwiMacOS Mojave
Apha sikubonisa zonke iindaba eziza kuvela kwisandla senguqulelo elandelayo ye-macOS, ebhaptizwe njengeMojave.
Ukuxhaphaza kufunyenwe kwisicelo sedesktop yeSteam ebesikho kule minyaka ili-10 idlulileyo
Ndiyabulela ngoncedo lwengcali yezokhuseleko kwikhompyuter uTom Court, ubungozi obukhulu obukhoyo kumthengi wecomputer we-Steam sele isonjululwe, neyathi ekugqibeleni yaxazululwa kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo yiValve.
Emva kokubona ukuba iimvavanyo ze-AVTEST zingqina njani ukuba iWindows Defender sesona sisombululo sisiso kwintengiso, inkampani iyibonisa ngebhlog yayo.
Ufuna umsebenzi? UGoogle uqalise ukukhangela umsebenzi eSpain
Kuyinyani ukuba kule mihla kulula ukufumana umsebenzi ngenxa yokubuyiselwa koqoqosho kweli lizwe, kodwa e ...
I-Starbucks idlula iApple Pay, uGoogle Pay kunye no-Samsung Pay kwiintlawulo ezihambayo
I-Starbucks yeentlawulo zeentlawulo zeselfowuni iyabetha eMelika. Fumanisa okungakumbi malunga nempumelelo yenkqubo yekhonkco yekofu eMelika.
IGoogle Duo izisa ukwabelana kwescreen kwi-Android
IGoogle Duo izakusebenzisa ukwabelana ngescreen kwi-Android. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kwizixhobo ze-Android kwinkqubo yokufowuna yevidiyo.
Ungayifaka njani indawo yolwandiso kwiGoogle Chrome
Ulwandiso olunoncedo olufanelekileyo kuso nasiphi na isikhangeli. Ukuba awukenzi isigqibo sokuzama izandiso kwisikhangeli esithandwa kakhulu kwintengiso, apha ngezantsi siza kukubonisa indlela yokufaka usetyenziso kwiGoogle Chrome.
Ukubethela kwe-PGP kunobungozi, i-imeyile ayisiyiyo indlela ekhuselekileyo yonxibelelwano
Iqela labaphandi likwazile ukubona ukuba semngciphekweni omkhulu kwezona ndlela zisetyenziswa kakhulu zokubethela imeyile kwihlabathi liphela.
Olona khetho lubalaseleyo kwiPowerPoint
Ngaba ujonge ezinye iindlela kwiPowerPoint? Olu lolona khetho lubalaseleyo ukwenza intetho kwi-intanethi okanye simahla kwikhompyuter yakho.
Enkosi ngokwamkelwa ebusweni e-India bakwazile ukufumana phantse i-3.000 yabantwana abalahlekileyo ngeentsuku ezine
Umbutho wase-India ukwazile ukuphuhlisa iqonga lokuqaphela ubuso elikwaziyo ukufumana abantwana abalahlekileyo. Ngexesha lovavanyo lokulinga, phantse abantwana abangama-3.000 bafunyanwa kwiintsuku ezingaphantsi kweentsuku ezine.
I-Chrome icotha kakhulu, ukuba ungayenza njani ukuqala kwakhona
Ukuba isikhangeli sikaGoogle seGoogle siqalisile ukubonisa iimpawu zokudinwa, isenokuba lixesha lokucoca. Apha ngezantsi sikunika isifundo esincinci apho sikubonisa ukuba wenzeni xa iChannel icotha kakhulu.
IFirefox iza kuqala ukubonisa iintengiso kuhlobo olulandelayo xa sivula isithuba esitsha
Isiseko seMozilla sisandula ukubhengeza ukuba ingxelo elandelayo yesikhangeli seFirefox iza kuqala ukubonisa iintengiso ngalo lonke ixesha sivula ithebhu entsha.
Isiphene sokhuseleko ku-Twitter sicebisa ukuba sitshintshe iphasiwedi
Kubonakala ngathi akukho mntu ukhuselekileyo kwiingxaki ezinxulumene nokukhuseleka kwepaswedi kwaye kule meko ...
Ungazikhangela njani iiThebhu eziVulekileyo zeChannel
Ukuba sifuna ukukhangela amagama phakathi kwazo zonke iithebhu ezivulekileyo kwisikhangeli se-Chrome, kufuneka sisebenzise ulwandiso olubizwa ngokuba yi-Search Plus.
Enkosi kuNVIDIA akusafuneki ukuba yingcali yePhotoShop ukuguqula umfanekiso njengepro
I-NVIDIA isibonisa iziphumo zokuqala zesoftware ekwaziyo ukuguqula imifanekiso ngokuzenzekelayo, into eya kwenza ukuba ungadingi ukwazi ukuphatha i-PhotoShop njengengcali.
I-WhatsApp izakuvumela ukuba sikhuphele ikopi yedatha yethu
I-WhatsApp ihlengahlengisa kumanyathelo amatsha aya kuqala ukusebenza ngoMeyi 25 kulo lonke elaseYurophu. Kwaye oku kuyakuvumela umsebenzisi ukuba akhuphele ikopi epheleleyo yedatha yabo yonke
I-Nintendo switchch iye yagqitywa kwaye akukho mntu unokuyilungisa
Amaqela amabini azinikele kuphuhliso lwezixhaphalo ezinje ngeFailOverflow kunye neReSwitched zikwazile ukuqhekeza iNintendo Shintsha ukuthatha ithuba lengxaki kwi-socked yeNvidia Tegra X1, ukusilela okungenakulungiswa yiNintendo uqobo.
Ingxoxo: Indlela entsha kaGoogle eya kuWhatsApp
Ingxoxo: Inkqubo emitsha yemiyalezo kaGoogle. Fumana ngakumbi malunga nesicelo somyalezo esitsha esiza kusungulwa yinkampani kungekudala.
IMicrosoft ivula ulwandiso lweWindows Defender lweChannel
Abafana abavela eRedmond basungule ulwandiso olutsha kwisikhangeli seChannel apho ivumela abasebenzisi bale browser ukuba bonwabele iWindows Defender
UGoogle uvavanya indlela emfutshane kwi-Chrome ukubhala i-Emojis
UGoogle uyasebenza ukuze ubhale i-emojis okanye iirobhothi kwiGoogle Chrome ngendlela elula. Ungayivavanya ngoku ngokusebenzisa iGoogle Chrome Canary
I-WhatsApp beta ikuvumela ukuba ubukele iividiyo zeYouTube ngaphandle kokushiya iapp
Le yinto abasebenzisi besi sicelo somyalezo bebeyibuza ixesha elide, ngoku kwi ...
Umfowunelwa wakho 'uyabhala' kodwa lo myalezo awugqibi ukufika .. Kwenzeka ntoni kanye kanye?
Ukungena apho siza kuhlalutya khona ukuba kwenzeka ntoni ngesalathi 'sokuchwetheza' esivela kwizicelo ezahlukeneyo zemiyalezo kwangoko xa umnxeba ebhala umyalezo.
Inguqulelo elandelayo Windows 10 iya kuvula kuphela amakhonkco eMeyile ngeMicrosoft Edge
Omnye wemisebenzi emitsha evavanywa nguMicrosoft kwiinguqulelo ezizayo ze Windows 10, siyifumana kuxanduva lokuvula amakhonkco eMeyile kuphela kwiMicrosoft Edge
Ungabhalisi, eyona ndlela ilula yokuphelisa ugaxekile
Ngaba ufuna ukulahla olo rhumo lucaphukisayo kwi-imeyile yakho? Ukungabhalisi yinkonzo yasimahla eya kukunceda kwasekuqaleni
IMicrosoft iphinda ivumele ukusebenza Windows 10 simahla
Ukuba ufuna ukwenza ikopi yakho Windows 10 simahla, kwezi ntsuku unethuba lokuyenza kwakhona ngaphandle kokuchitha iyuro enye.
Umenzi wengoma: Isixhobo esitsha sikaGoogle ukwenza umculo wakho
Umenzi wengoma: Isixhobo esitsha sikaGoogle ukwenza umculo wakho. Fumanisa ngakumbi ngesi sixhobo sikuvumela ukuba wenze umculo.
I-WhatsApp izakuvumela ukuba ucime imiyalezo ethunyelwe ngaphezulu kweyure eyadlulayo
I-WhatsApp ye-Android iya kufumana uhlaziyo olutsha apho siya kufumana khona uphuculo olubaluleke kakhulu ngokwexesha lokucima umyalezo.
I-Movavi: Abahleli beefoto kunye nevidiyo abagqibeleleyo kwiWindows nakwiMac
I-Movavi: Abahleli beefoto kunye nevidiyo abagqibeleleyo kwiWindows nakwiMac.Fumana okuninzi malunga naba bahleli abaza kwenza ukuhlela iifoto okanye iividiyo kube lula kwaye zisinike ukhetho oluninzi.
Iinkqubo zobukrelekrele zikaGoogle sele zikwazi ukubhala amanqaku e-Wikipedia ngokuzimeleyo
Iinjineli zikaGoogle zikwazile ukuxhobisa iinkqubo zazo zobukrelekrele bokufakelwa ngomthamo owaneleyo ukuze le software ngoku ikwazi ukubhala amanqaku e-Wikipedia ngokuzimeleyo.
IMicrosoft icoca iVenkile kaMicrosoft, isusa zonke iiapps ezisebenzisa igama leWindows
IMicrosoft iqalile ukucima zonke usetyenziso ezibonisa igama elithi Windows egameni labo okanye kwinkcazo, ukubathintela ekulahlekiseni.
I-Pixabay isungula izixhobo ezimbini ze-Photoshop kunye neOfisi yeMicrosoft
UPixabay ukhuphe izixhobo ezimbini eziza kudityaniswa ngaphandle komthungo kunye neAdobe Photoshop kunye neMicrosoft Office ukubonelela ngamava omsebenzi olunge ngakumbi
Iifoto zeMicrosoft Companion, indlela elula yokuhambisa iifoto ukusuka kwiselfowuni yakho kwiPC yakho
UMicrosoft usungule usetyenziso olutsha lwe-Android kunye ne-iOS ukwenza ukuhanjiswa kweefoto kwiselfowuni okanye ithebhulethi yakho ukuya Windows 10 ngokukhawuleza okukhulu nangakumbi.
Ungayifumana njani kwakhona iqhosha «Jonga umfanekiso» kwiGoogle Chrome nakwiFirefox
Enkosi kulwandiso lukaGoogle Chrome, emva kweeyure ezingama-24 ususe ukujonga imbonakalo yomfanekiso kuphando lwemifanekiso, sinokuphola ngokulula.
UGoogle ucacisa indlela esebenza ngayo i-blocker entsha ye-Chrome
Ukungena apho siza kuthetha malunga nendlela, njengoko kuchaziwe nguGoogle uqobo, ibhlokhi yentengiso abayidibanisileyo kwisikhangeli se-Chrome
UFedora unesisombululo sokwandisa ukusebenza kwebhetri yeLaptop nge-30%
Iqela labaphuhlisi beFedora likwazile ukumilisela uphuculo oluninzi abathi banokonyusa ubomi obuncedo bebhetri yakho yeLaptop ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30.
Ukuqala ngoJulayi, isikhangeli se-Chrome siya kusazisa xa sityelele iwebhusayithi engakhuselekanga
Ukuqala ngoJuni, isikhangeli sikaGoogle, iChannel, siza kuqala ukwazisa abasebenzisi xa betyelele iwebhusayithi engakhuselekanga, oko kukuthi, iHTTP, ke ayitshintshi idatha xa ithunyelwa kwi-Intanethi.
Udlala njani iifayile zeMVV
Iifayile zeMKV zezona zikhetho zibalaseleyo zokubeka iifomathi ezahlukeneyo zeaudiyo, zevidiyo kunye nemixholo engezantsi kwifayile enye, kodwa ngelishwa ayizizo zonke iinkqubo zokusebenza ezinikezela ngenkxaso yemveli. Kule nqaku sikubonisa ukuba ungazidlala njani iifayile ze-mkv kunye nento oyifunayo ukuze kungabikho bhanyabhanya inokukuchasa.
I-Opera 51, isikhangeli esitsha se-Opera sikhawuleza kuneFirefox Quantum
I-Opera isungule inguqulelo entsha yesikhangeli sayo esithandwayo: I-Opera 51. Le nguqulo ibandakanya ukuphuculwa okuninzi kunye nenqanaba njengesikhangeli sewebhu esikhawulezayo namhlanje
IMicrosoft iyabulala Windows 10 Iinyanga ezili-8 emva kokukhutshwa kwayo
Ingxilimbela yaseRedmond kunyaka ophelileyo yasungula ukubheja okutsale ingqalelo ekhethekileyo nalapho ...
I-ChromeOS 64 iza nophuculo ekudala lulindelwe
UGoogle usungula uhlaziyo olutsha kwinkqubo yalo yokusebenza kwe desktop. Le yi-ChromeOS 64, ebonelela ngophuculo oluninzi
Uyilungisa njani into ebalulekileyo Windows 10 impazamo
Enye yeengxaki abasebenzisi abaninzi abanengxaki nazo imihla ngemihla inxulumene neempazamo ezibalulekileyo Windows 10, iimpazamo ezibalulekileyo ezinesisombululo esilula njengoko sikubonisa kweli nqaku. Ngaba unempazamo ebalulekileyo kwimenyu yokuqala kunye necortana? Ngena kwaye siza kukuxelela indlela yokusombulula.
Uyilungisa njani inkqubo "com.google.process.gapps iyekile" impazamo
Ukuba umyalezo "com.google.process.gapps uyekile" ubonakala uqhubeka kwisixhobo sakho, nanga amanyathelo ekufuneka uwalandele ukusombulula.
Kwiiyure ezimbalwa uXiaomi usombulula ingxaki yohlaziyo lweMi A1
Inyani yile yokuba iyavunywa into yokuba inkampani yaseTshayina ibeke iibhetri ngalo mbandela kwaye ...
Ukuhlaselwa kwe-EQUIFAX kufikelela esiphelweni ngokubiwa kolwazi olunelungelo ukusuka kubasebenzisi abazizigidi ezili-143
Iqela lomgculeli likwazile ukuba idatha engaphantsi kwesigidi se-143 kwiziko lakho letyala i-EQUIFAX, inkxaso-mali ye-ASNEFF.
Lungisa iifoto ezonakeleyo
Fumanisa ii -apps ezi-4 zokulungisa iifoto ezonakeleyo ukuze ungalahli loo mifanekiso ibalulekileyo yexesha elikhethekileyo. Ukufumana kwakhona iifoto ezonakeleyo kunokwenzeka.
Amaxwebhu akutshanje kwiWindows 10
Fumana ukuba ujonga njani iifayile zakutshanje kwiWindows 10. Ukuba ulahlile umkhondo wamaxwebhu akho akutshanje ngaphakathi Windows 10, funda eli nyathelo ngenyathelo lesifundo.
Sifumana ezona jenereyitha zibalaseleyo zokunika ukuze wenze isibonelelo esikwi-Intanethi samagama okanye nantoni na oyifunayo. Ngena kwaye uququzelele i-raffle yakho!
Tshisa i-ISO kwiDVD
Izicelo ezi-5 zokutshisa i-ISO kwiDVD okanye ezinye izinto ezinje ngeCD-ROM okanye iBluray. Ukuba kuya kufuneka utshise umfanekiso we-ISO kwiDVD, siza kukubonisa ukuba ungayenza njani.
IPhepha leDropbox liphucula ukusebenzisana kunye noMzobo, iifolda, kunye nokunye
Iphepha leDropbox liphucula indawo osebenza kuyo ngokubambisana nezinto ezintsha ezinje ngeFolders, Archive, Sketch integrated and more.
Ufuna ukwenza igrafiti? Ezi zezonaapps zibalaseleyo kunye neewebhusayithi zokwenza iGrafiti esimahla. Ngaba uyazi iGraffiti yoMdali? Fumanisa!
UGoogle Chrome uyasivumela ukuba sisuse isandi kumakhasi ewebhu unaphakade
Omnye wemisebenzi ebaluleke kakhulu eya kuthi iinguqulelo ezilandelayo ze-Chrome ifumaneke kukhetho lokuphelisa isandi sewebhu
Ngoku ungasebenzisa isikhangeli seSamsung "kuzo zonke" ii-smartphones ze-Android
Isamsung yazisa ukuba isikhangeli sayo se-intanethi i-Samsung Internet Browser ngoku sinokusetyenziswa kuyo nayiphi na i-smartphone ye-Android
I-NASA ixhomekeke kwiinkqubo zobukrelekrele ze-Intel zokujonga indawo
I-NASA isandula ukubhengeza isivumelwano sokusebenzisana ne-Intel yokusebenzisa iinkqubo zayo zobukrelekrele kuhlalutyo lwedatha ye-arhente.
Ngoku ungathatha iifoto zepanoramic kunye nee-360º ngaphandle kokushiya u-Facebook
Uhlaziyo olutsha kuFacebook luvumela abasebenzisi ukuba bathathe kwaye babelane ngeepanoramic kunye neefoto ezingama-360º ngaphandle kokushiya usetyenziso lweselfowuni
I-Android Oreo: igama layo liqinisekisiwe kwaye zezi ziindaba eziphambili
UGoogle uzise ngokusesikweni inguqulelo yakhe entsha yenkqubo yokusebenza kweeselfowuni kunye neetafile: I-Android Oreo okanye i-Android 8.0
I-Android O iya kuziswa ngokusesikweni ngo-Agasti 21
I-Android O iya kubhengezwa ngokusesikweni nge-21 ka-Agasti. Oko kukuthi, iya kwabelana ngokuqaqamba kunye nokufiphala kwelanga okulandelayo
Lungiselela Windows 10
La maqhinga aya kusinceda ukuba sisebenzise Windows 10 kwaye yenze ukuba ikhompyuter yethu isebenze ngcono, ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokusinika iingxaki ezininzi.
Ukufikelela kwii-4.000 zeapps ezinokukuhlola
Ezinye iingcali zokhuseleko zifumanise ukuba zingaphezulu kwama-4.000 ii-aplikeshini ze-Android ezinokuthi zihlole into oyenzayo ngeselula yakho
Ungalukhuphela phi ulwimi lweSpanish Windows 7 okanye Windows 10? Fumana iqhinga lokufaka okanye ukukhipha ipakethi yolwimi kwiWindows
Windows 10 Umbukeli weSithombe uhlala edinisa kwaye ecotha. Kungenxa yoko le nto sikufundisa indlela yokubuyela kwiWindows Image Viewer ngaphakathi Windows 10.
Ungawukhuphela njani uMculo kwiYouTube ngeVidToMp3
Sikubonisa indlela yokusebenzisa iVidtoMP3 kunye nezinye iindlela zokukhuphela umculo simahla, iividiyo kunye neengoma ezivela kwiYouTube kwifomathi yeMP3.
Ukucoca nokukhawulezisa ukusebenza kwePC yakho kunye neNero TuneItUp
Ndiyabulela kwisoftware yeNero TuneItPro, sinokuphucula ukusebenza kwePC yethu kwimizuzwana embalwa.
I-WhatsApp izakuphucula amanqaku elizwi kwaye uya kuba nexesha lokurekhoda
Uhlaziyo lweWhatsApp luqhelekile. Kwaye eyokugqibela inento yokwenza nenye yezona zinto zithandwayo kule nkonzo: imiyalezo emanyelwayo
Uthini umxholo wemeko? Ukuba uyazi ukuphatha imenyu yokuma kwiWindows, uya konga ixesha elininzi usebenza nekhompyuter yakho. Sikubonisa indlela yokuyisebenzisa.
Enkosi ngenkonzo entsha yeMozilla, singathumela iifayile ukuya kuthi ga kwi-1 GB ngokukhuselekileyo
Enkosi kuThumela, singathumela iifayile ukuya kuthi ga kwi-1 GB ngobukhulu ngendlela ekhuselekileyo ngokupheleleyo nangokuphelelwa
OffLiberty, khuphela iividiyo ezinde kwi-youtube
I-OffLiberty sisicelo sewebhu sasimahla esivumela ukuba sikhuphele iividiyo kunye nomculo kwiYouTube siye kwiPC yethu, iselfowuni okanye ithebhulethi kwifomathi yeMP4 kunye neMP3.
Ndiyazi njani ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo?
Fumana indlela yokwazi ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo kwikhompyuter yam ngobuqili obulula okanye izixhobo ezininzi zasimahla. Yeyiphi imodeli ye-HDD okanye ye-SSD onayo? Yifumane!
Vimba amajelo e-YouTube
Ukuba ufuna ukuvimba amajelo e-YouTube, ngobuqhetseba obuncinci siya kuba nethuba lokuvimba iividiyo zejelo le-YouTube ongazithandiyo.
I-Android 8.0 Octopus?
Iqanda lephasika elifihlwe kwi-beta ezine ze-Android 8.0 lisete ii-alamu: Ngaba i-Octopus iya kuba ligama elinikwe kule nguqulo intsha?
I-WhatsApp inerekhodi entsha: 1.000 yezigidigidi zabasebenzisi bemihla ngemihla
I-WhatsApp sesona sicelo sithandwayo sithunyelwa ngokukhawuleza emhlabeni. Kwaye amanani ababanike kwiblogi yabo esemthethweni bayakuqinisekisa.
Uyisebenzisa kanjani iAlarm kunye nokuvuka kuyo Windows 10
Windows 10 ine-alamu, iwotshi ye-alamu kunye nexesha elinoyilo olujolise endaweni yeefowuni eziphathwayo. Sikubonisa ukuba zisetyenziswa njani
UGoogle ufuna ukusombulula zonke iingxaki zokudityaniswa kwenyukliya
UGoogle usandula ukubhengeza umanyano lwayo kunye nenkampani ye-Tri Alpha Energy ukuphuhlisa inkqubo ekwaziyo ukusombulula iingxaki ze-fusion yenyukliya
UKaspersky uphehlelela i-antivirus yasimahla yeWindows
I-Kaspersky Lab ivula i-antivirus yasimahla yeWindows ekuthiwa yiKaspersky Lab, yintoni kanye kanye enayo kwaye kutheni iyivula ngoku?
Iimpendulo zeGmail ngoku ziyafumaneka ngeSpanish
I-Gmail Smart Answers ayisafumaneki ngesiNgesi kuphela, kodwa iqela lophuhliso longeze ulwimi olutsha: iSpanish.
Le yeyona ndlela inexabiso eliphantsi yokujonga ikhaya lakho nge-smartphone yakho
Ukungena apho siza kuthetha ngenkqubo elula kakhulu yokuphumeza ukulawula ukubeka iliso ekhayeni lakho ngeeholide zasehlotyeni.
Le yimisebenzi kunye nokusetyenziswa okuya kuthi shwaka kuhlaziyo olulandelayo lwe Windows 10
UMicrosoft usandula ukubhengeza ngebhlog yakhe eya kuba yimisebenzi kunye nokusetyenziswa okungasayi kubakho kuhlobo olulandelayo lweWindows
Ngaba ungomnye wabo babhalisela kwinkonzo ezininzi kwaye emva koko ufumane ibhokisi yakho engenayo igcwele Spam? KwiDeseat.me unaso isisombululo
I-Atomian, ligama le-Big Brother elisetyenziswa yi FC Barcelona
I-FC Barcelona ifuna umphathi omkhulu wayo yonke idatha eyivelisayo. I-Atomian ilawula ukuba ngu-Big Brother wakhe
I-CCleaner itshintsha ubunini kwaye ibe yinxalenye ye-Avast
Kwiminyaka yakutshanje sibonile ukuba iinkampani zesoftware ezintsha zifumene njani umsantsa obalulekileyo ...
Ujonga njani iiphasiwedi ezifihliweyo emva kweeasterisks
Ngamaqhinga amancinci siya kuba nethuba lokubona iipaswedi ezifihliweyo emva kwe-asterisks. Ukuba awukhumbuli ipasi, yindlela onokuyibona ngayo.
IAmazon ibiya kusebenza kwi-app yayo yemiyalezo ebizwa ngalo naliphi na ixesha eza kuzisa imisebenzi emitsha kunye nokudityaniswa nezinye iimveliso zayo
Iiprosesa zamagama ezikwi-Intanethi
Ngaba uyafuna ukusebenzisa iLizwi kwi-Intanethi kwaye simahla? Ungaphuthelwa kukukhethwa kweeprosesa zamagama asimahla kwi-Intanethi ukuhlela amaxwebhu.
UGoogle usungula isicelo sokwenza iikopi zehard drive yethu kwiDrayivu
UGoogle usandula ukwazisa usetyenziso olutsha lokugcina naluphi na uhlobo lwefayile kwikhompyuter yethu kwiGoogle Drayivu.
Ukungena apho siza kuthetha ngomsebenzi omkhulu wokugqibela owenziwe nguGoogle, ubukrelekrele bokuzenzela obunakho ukuhlela iifoto ngomgangatho wobungcali.
Ungaphoswa ngabahleli bevidiyo besimahla onokuzikhuphelela iiWindows, iMac okanye iLinux. Ukuba ufuna umhleli wevidiyo, uya kuyifumana Apha.
Sala kakuhle kwiWindows Phone 8.1
IMicrosoft iyeke ukubonelela ngenkxaso yeWindows Phone 8.1, ke abasebenzisi abazukuphinda bafumane uhlaziyo lwalo naluphi na uhlobo
Ubuntu ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe kuGcino lweWindows
Ubuntu ngoku iyafumaneka simahla simahla kwiVenkile yeWindows kwaye kweli nqaku siza kukuxelela ukuba uyifaka njani.
I-Snapchat iyaqhubeka nokwenza umohluko
I-Snapchat iqala uhlaziyo olutsha olupheleleyo lweendaba: yabelana ngamakhonkco angaphandle, tshintsha ilizwi lakho kwaye utshintshe imvelaphi
I-Instagram ngoku ivumela ukubhloka kwezimvo kunye nogaxekile
I-Instagram isandula ukukhupha uhlaziyo olutsha apho abasebenzisi baya kuba nakho ukuthintela imiyalezo ekhubekisayo kunye nogaxekile.
Ungakhubaza njani uhlaziyo oluzenzekelayo kwiwindows 10
Nantsi indlela yokukhubaza uhlaziyo oluzenzekelayo kwiWindows 10. Khusela iPC yakho ekuzihlaziyeni ngokuzenzekelayo ngendlela engalindelekanga ngala manyathelo.
Uyibuyisa njani yonke idatha yakho elahlekileyo kwi-iPhone kunye ne-iPad
IMobiSaver sisoftware ekuvumela ukuba uphinde ufumane idatha elahlekileyo okanye ecinyiweyo kunye neefayile kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad, okanye kwii-backups zakho kwi-iCloud okanye kwi-iTunes
I-DMZ, lonke ulwazi oludingayo ukwenza eyakho indawo ekhubazekileyo
Fumanisa ukuba yintoni umphathi we-DMZ, ukuba iqulunqwe njani kwaye yintoni ukhetho lwe-DMZ olukhoyo kuzo zonke iirouters kwintengiso. Ngaba iyaluphucula unxibelelwano kwimidlalo yevidiyo?
UFacebook uzakwazisa usetyenziso olutsha ukwenza umxholo wevidiyo
Abafana eMark Zuckerberg babhengeze ukumiliselwa komhleli wevidiyo wabadali bemixholo ekupheleni konyaka.
Windows 10 ikhowudi yemithombo evuzayo iyinyani njengoko iqinisekisiwe nguMicrosoft
IMicrosoft ayinandlela yimbi ngaphandle kokuqinisekisa ukuba yintoni imfihlo evulekileyo, ikhowudi yemithombo evuzayo Windows 10 iyinyani.
Iibhothi ezilungileyo zeTelegram
Fumanisa i-bots efanelekileyo yeTelegram. Sichaza ukuba yintoni i-bot, yeyantoni kwaye icwangciswe njani ukuze ufumane uninzi lweTelegram.
I-Spotify isungula uluhlu lokudlalayo lweqela kulwandiso lweMessenger
Ngomsebenzi omtsha weSpotify, unokwenza iqela okanye uluhlu lokudlalwayo olunokuthi nabo abahlobo bakho be-Facebook banokuthatha inxaxheba kulo.
Uyenza njani into efundwa mininzi kwiFirefox 54
Umsebenzi ofundwe mininzi awusebenziswanga ngokwendalo nje ukuba sihlaziye kwiFirefox 54. Sikubonisa ukuba ungayenza njani.
Iingxaki xa udlala kwi-Intanethi? Mhlawumbi ukujonga i-PING yonxibelelwano lwakho kuya kukunceda
Ukungena apho siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo zokuphucula i-ping yekhompyuter yethu ukuze siyeke ukubandezeleka ngenxa yokudodobala xa sidlala kwi-Intanethi.
I-Facebook iyamangaliswa ziziphumo ezingalindelekanga ezinikezelwa yinkqubo yobukrelekrele bayo
Zininzi izibonelelo okanye ixesha, nazo zonke ezi zinto zibandakanya, ngakumbi ngokweendleko, ...
Olwandiso kunye nezongezo zeFirefox
Fumana olona lwandiso lubalaseleyo kunye nezongezo zeFirefox, esinye sezona zikhangeli zibalaseleyo kwimarike onokuthi uyiphucule ngezongezelelo ezininzi.
Olona lwandiso lubalaseleyo lweChannel
Kwivenkile yeChannel sinokufumana inani elikhulu lezandiso ukwenza ngokwezifiso ukusetyenziswa kweChannel. Sikubonisa eyona ifumanekayo.
Indlela yokunciphisa ingxolo kunye nokuphucula isisombululo seefoto ngesixhobo esikwi-Intanethi
Fumanisa indlela elula yokuphucula isisombululo sefoto kunye nokunciphisa ingxolo kwi-Intanethi ngaphandle kwesidingo seenkqubo ezintsonkothileyo ezinjengeFotohop.
Iimoodnotes, usetyenziso lwempilo yengqondo olusuka kubayili beMonument Valley
I-Moodnotes yinkqubo ephuhliswe yintloko ye-Monument Valley kunye neengcali zengqondo ezimbini ezisinceda ukuba siphucule impilo yethu yengqondo
Zonke iindaba kwi-iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 kunye neMacOS ePhakamileyo yeSierra
Sikubonisa zonke iindaba zokuba iinkqubo ezisebenzayo zeApple eziza kufika kuguqulelo lwabo lokugqibela ukusukela ngoSeptemba
Nge-iOS 11, i-iPad ithatha ithuba elikhulu lokuvelisa
I-iPad isandula ukufumana amava ayo amakhulu okuqhubela phambili kwimveliso enkosi kwi-iOS 11 kunye neendaba zayo ezimnandi: Iifayile, Isitshintshi seApp, Tsala kwaye ulahle nokunye
IMicrosoft yazisa i-iTunes iza kwiVenkile yeWindows yeWindows kungekudala
IMicrosoft ibhengeze kuKwakha i-2017 ukuba i-iTunes izakufumaneka ukukhuphela ngokukhawuleza kwi Windows 10 Ivenkile yeWindows.
USatya Nadella uyangqina ukuba Windows 10 ifakwe kwizixhobo ezizizigidi ezingama-500
Windows 10 sele ikho kwizixhobo ezizizigidi ezingama-500 okanye yintoni efanayo neMicrosoft ikude kakhulu ekufezekiseni injongo yayo yokuqala.
Izicelo ezi-7 onokuhlala usazi apho upake khona
Ukuba ungomnye wabo bahlala belibala ukuba upake phi, sikubonisa izicelo ezi-7 zokusombulula le ngxaki
I-YouTube sele inemowudi emnyama kunye nezinto onokukhetha kuzo ezikhoyo ezikhoyo
Uyilo olutsha lwe-YouTube sele lunokusetyenziselwa iiveki ezimbalwa kwaye ungayenza ngokuthe ngqo kwiwebhu ...
Uyivula njani ifayile yePDF
Ukuvula ifayile kwifomathi yePDF yinkqubo elula kakhulu kwaye kuya kuthatha imizuzu embalwa ukulandela elinye lamanyathelo esiwacebisayo.
Ungamkhubaza njani uCortana ngamanyathelo ama-3
Yenza iCortana isebenze, umncedisi weMicrosoft, ngamanyathelo amathathu alula ngoku nangendlela elula.
Izikhangeli ezilungileyo zeWindows
Sikubonisa uluhlu lwezona bhrawuza zilungileyo zeWindows, esinokukhuphela ngokukhawuleza, sizifakele kwaye sizonwabele kwiWindows PC yakho
I-WhatsApp ihlaziywa kwi-iOS evumela uSiri ukuba afunde imiyalezo
Abasebenzisi be-IOS banethamsanqa ukuba basebenzise iSiri kunye neapp ye-quintessential yemiyalezo, i-WhatsApp. Ngeli xesha ...
Amaqhinga ama-7 okuthatha ithuba lokufihla iikhowudi zeNetflix kunye neemenyu
Ukungena apho siza kuthetha khona ngamanye amaqhinga 'anomdla kakhulu onokuba nawo njengomsebenzisi obhalisiweyo weqonga leNetflix.
Izikhangeli ezilungileyo zeMac
Ezi zezona zikhangeli zibalaseleyo zeMac onokuzikhuphelela, uzifake kwaye uzonwabele ngoku kwikhompyuter yakho ye-Apple.
I-Chrome inokudibanisa ibhlokhi yentengiso kuzo zonke iinguqulelo zayo
Ngokwemithombo enxulumene neChannel, uGoogle angadibanisa isibhengezo sentengiso kwiinguqulelo ezilandelayo zeChannel
I-Snapchat inesibindi esinezihluzi zenyani ezingathandekiyo
I-Snapchat ibhengeza iindaba kwiqonga layo, kubandakanya ukufika kweefilitha ezintsha eziphambili ngokubhekisele kwinyani eyongeziweyo.
Ukulinda kufikelela esiphelweni, iAmazon Pay ekugqibeleni ifika eSpain
Emva kokulinda ixesha elide ekugqibeleni sinokwazisa ukuba iAmazon Pay ekugqibeleni iyafumaneka eSpain.
Inguqulelo entsha yeGoogle Earth iyafumaneka ngoku
Ngokuqinisekileyo ngaphezu kweyodwa ekhoyo apha isebenzisa okanye isetyenziswe kwiGoogle Earth, kuba esi sixhobo esikhulu ...
Uyenza njani Windows 10
Sikubonisa yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukusebenza ngokuchanekileyo Windows 10
Ungayenza njani into ekwi-hard drive ngokulula nangokukhawuleza
Kuya kufuneka udibanise i-hard drive yekhompyuter yakho, ungakhathazeki namhlanje sichaza indlela yokwenza ngokukhawuleza nangokulula.
Ikhalenda kaGoogle kunye ne-Outlook yokuQhagamshela kweSync iyaqhubeka nokuvavanywa kwi-macOS
Ikhalenda kaGoogle kunye ne-Outlook yoQhakamshelwano lokuQhagamshela zifumana uthotho lweziphuculo ezivela kuMicrosoft kubasebenzisi be ...
IMicrosoft ayisaboneleli ngenkxaso ngokusemthethweni yeWindows Vista
Ewe, nangona iindaba zazisazisa ixesha elide ukuba iMicrosoft iyeke ukuxhasa inkqubo yokusebenza ...
Ungayiguqula njani ifoto ibe ngumzobo
Ukuguqula iifoto zethu zibe yimizobo yinkqubo elula kakhulu enkosi kwinani elikhulu lezicelo ezikhoyo kwinkqubo nganye yokusebenza.
Uyikhuphela njani mahala Windows 10, i-8.1 kunye ne-7 kwifomathi ye-ISO
Namhlanje sikubonisa indlela yokukhuphela Windows 10, 8.1 kunye no-7 simahla kwifomathi ye-ISO, ukukukhupha kwiingxaki ezininzi kwaye ukugcinele imali elungileyo.
Uyigcina njani indawo yokupaka yakho kwiimephu zikaGoogle
Ukungena apho siza kubonisa khona isisombululo esilula kakhulu ukuze sikwazi ukugcina indawo yezithuthi zethu kwiimephu zikaGoogle.
Inguqulelo entsha ye-Twitter ifikile, i-Twitter Lite esivumela ukuba sigcine idatha
Ukuba kukho inethiwekhi yoluntu endiyithandayo, yi-Twitter. Kuyinyani ukuba ineenkcukacha ezithile eziya kuthi ...
Indlela yokususa iintengiso Windows 10
Enkosi kule fayile incinci iguqula irejista, sinokuzicima zonke iintengiso esizibonayo Windows 10 isibonisa
I-Apple Music ye-Android ihlaziywa ngonxibelelwano olufana nolo lwe-iOS
Xa umsebenzisi we-iOS 10 wanyanzelwa ukuba asebenzise i-Android, kwaye wayefuna ...
UGoogle uqalise i-Android 7.1.2 yeNexus kunye neGoogle Pixel
Inguqulelo entsha ye-Android 7.1.2 sele iqala ukufikelela kwizixhobo zeGoogle Nexus kunye neGoogle Pixel. Oku…
Ngaba kunokwenzeka ukuthumela iincasa kwi-Intanethi? Abaphandi sele besebenza kuyo
Iqela labaphandi abavela kwiYunivesithi yaseSingapore bayayila indlela yokuthumela iincasa kwi-intanethi.
I-Telegram ihlaziywa ukongeza iifowuni
I-Telegram ngokungathandabuzekiyo isicelo sokuthumela imiyalezo ngandlela-thile ejongene ne-WhatsApp eyaziwayo. Oku…
I-NASA iyasimangalisa ngethala leencwadi eligcwele izandi, iifoto kunye neevidiyo ezivela emajukujukwini
I-NASA iyasimangalisa ngokukhutshwa kweinjini yokukhangela entsha ezinikele ekuboneleleni ngemifanekiso, iividiyo kunye nomsindo osemajukujukwini.
I-WhatsApp inciphisa ixesha lokucima imiyalezo ukuya kwimizuzu emibini
Ukukwazi ukucima imiyalezo kuWhatsApp ngokungathandabuzekiyo yenye yeendaba ekulindeleke ukuba zenziwe ngabanye abasebenzisi ...
UMicrosoft ujongene netyala elitsha lokuhlaziya iikhompyuter ngaphandle kwemvume
Abafana abavela eRedmond bajongene nemfuno entsha evela kubasebenzisi yokuphucula ngokuzenzekelayo ukuya Windows 10
IMicrosoft isusa iDocs.com emva kwempazamo enkulu
Kule mpelaveki inye uMicrosoft uthathe isigqibo sokususa iDocs.com emva kokubonisa ukuba injini yokukhangela ikhuphe izigidi zedatha yabucala.
I-Spotify ibhengeza ukuthengwa kweMightyTV
U-Spotify wenze nje izihloko emva kokubhengeza ukuthengwa kweMightyTV, iqonga lokucebisa ngesiqulatho esimanyelwayo.
Iingcebiso ezili-10 ezibalulekileyo zokwenza iwebhusayithi eneWordPress
Iingcebiso ezili-10 ezisisiseko xa useta iwebhusayithi eneWordPress. Ukuba uza kusebenzisa i-Wordpress, akufuneki ulibale ukulandela ezi ngcebiso nganye nganye.
UWhatsApp uya kwazisa abafowunelwa bakho ngokuzenzekelayo ukuba utshintshe inombolo yakho yefowuni
I-WhatsApp iphuhlise ukusebenza apho abafowunelwa bethu baziswa ngotshintsho kwinombolo yefowuni.
Uhlaziyo lwe-Instagram kukhuseleko
I-Instagram iya kuhlaziywa ngamanyathelo amabini okhuseleko, enye yeyokuqinisekisa iakhawunti kunye nenye yezinto ezibuthathaka.
I-emojis entsha inokubonwa kwiwebhusayithi ye-Emojipedia
Kwaye i-emoji yinxalenye yeencoko zethu ngokusebenzisa izicelo zemiyalezo kwaye ezi ziyongeza kwaye ziguqula ezi ...
I-Apple ibhengeza ukuthengwa kokuHamba koMsebenzi
Bobabini abo banoxanduva lokuphuhliswa kwesicelo sokuhamba komsebenzi kunye neApple uqobo buqinisekisile ukufunyanwa yiApple.
Umboniso, imbangi ka-Apple yeeapps ezinje nge-Instagram kunye ne-Snapchat
I-Apple iveza iiVideos, inethiwekhi entsha yezentlalo eya kukhuphisana, ukuqala kwinyanga ezayo, nabanye abanjengo-Instagram okanye uSnapchat.
I-WhatsApp kunye nobume bayo bokubhaliweyo ngoku buyafumaneka kwi-Android kwakhona
Kule veki iphelileyo ukwaziswa kwesimo se-WhatsApp kwifomathi yokubhaliweyo kwabhengezwa, kwaye ...
I-Chrome iphucula kakhulu ukulungiswa kwemifanekiso ye-3D
Kuhlaziyo lwamva nje lweGoogle Chrome, inkxaso kumgangatho weWebGL 2.0 ubandakanyiwe ukuphucula unyango lwemifanekiso ye-3D.
Iifayile zeJPEG ngoku ziya kuba yi-35% yokukhanya ngenxa yesoftware kaGoogle
Iqela labaphandi bakaGoogle liphuhlise ialgorithm entsha ekwaziyo ukunciphisa ubungakanani bemifanekiso yeJPEG ngelixa inyusa umgangatho wayo.
I-Gmail ngoku ikuvumela ukuba udlale iividiyo ngaphandle kokuzikhuphela
UGoogle usandula ukubhengeza uhlaziyo olutsha lweGmail onokuthi ngoku ubukele iividiyo ngaphandle kokuzikhuphela.
Ngoku ungasebenzisa i-Alexa njengomncedisi onenyani kwi-iPhone yakho
Kuhlaziyo lwamva nje lwesicelo seAmazon sezixhobo ze-iOS, ukubakho kokusebenzisa i-Alexa njengomncedisi onyanisekileyo kufakiwe.
I-WhatsApp ibuyela umva kwaye iya kuvumela abasebenzisi ukuba babeke imeko yombhalo
Ukubuyela umva kuWhatsApp kwaye uthathe isigqibo sokuvumela bonke abasebenzisi beqonga lokuthumela imiyalezo kwangoko ukuze bakwazi ukubhala imibhalo ebhaliweyo.
I-Gmail sele ikuvumela ukuba uthumele imali ngeqonga layo
Okokugqibela, uGoogle ubhengeze ngokusesikweni ukuba iWallet iza ngokusemthethweni kwi-Android ngokwendalo, eya kuthi ibe lula kakhulu ekusebenziseni kwayo.
I-Skype ye-macOS ngoku iyahambelana neTouch Bar yeMacBook Pro entsha
Uhlaziyo lwamva nje lwesicelo seMicrosoft Skype, ukwenza iifowuni kunye neefowuni zevidiyo, kuyenza ihambelane neTouch Bar
Ezi ziindaba zovuselelo lweGoogle Hangouts
UGoogle akasazi ngokuqinisekileyo ukuba enze ntoni ngeGoogle Hangouts, kule nguqulelo kubonakala ngathi bafuna ukugxila ekusebenziseni kwinqanaba leshishini.
I-DeepCoder ngoku iyakwazi ukwenza ezayo iinkqubo kunye nokusetyenziswa
Yonke imihla izisombululo ezitsha nezimangalisayo ziboniswa apho abadali babo bafuna ukwenza ubomi bethu bube kancinci ...
Inguqulelo yeChannel 57 ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe
UGoogle usandula ukukhupha uhlaziyo olutsha lwe-Chrome, inombolo 57, uguqulelo olukhubaza ukufikelela kwiiplagi.
UGoogle ukwazile ukuphucula umguquli wakhe enkosi ekusebenziseni ubukrelekrele bokuzenzela
UGoogle ubhengeza ukuba iinjineli zayo zongeze iilwimi ezintathu ezintsha kwiqonga layo lokuguqulela ulwimi nge-AI.
Uyongeza njani eyakho imidlalo kwi-NES Mini Mini
Ngoku sizamile kwaye kwabonakala kulula kwaye kuyacetyiswa ukuba sinike le console ubomi besibini.
Ezi ziindaba eziza kukhutshwa nguWhatsApp kuhlaziyo olulandelayo
I-WhatsApp sele inovuselelo olutsha olulungele i-app eyaziwayo kunye nemisebenzi emitsha eya kuthi, ubuncinci, ongayithandiyo.
IAmazon iya kukhupha naluphi na ulwazi olunayo ukuba inokunceda ukusombulula ulwaphulo-mthetho
Emva kwesicelo somsebenzisi ongumnini weAmazon Echo, inkampani kufuneka ishiye yonke idatha ebhalwe ngumncedisi obonakalayo.
Kungekudala siza kuba nakho ukucima imiyalezo ethunyelwe nge-WhatsApp
Emva kokufumana iindaba zenqanaba leWhatsApp kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ngoku sisondele kun ...
Enkosi kwiifoto zikaGoogle ngoku kulula kakhulu ukulungisa umbala weefoto zakho
Iifoto zikaGoogle zisandula ukuguqulwa ukongeza ukusebenza okongezelelekileyo okwaziyo ukwenza iifoto zakho zivele ngokukhanya okufanelekileyo kunye nemvakalo.
Umncedisi kaGoogle ubhengeze zonke izixhobo ze-Android
Le yividiyo apho inkampani isandula ukwazisa umncedisi wayo buqu kuzo zonke izixhobo ...
Isiphene esikhulu sokhuseleko esifunyenwe kwiSlack
Ingcali yezokhuseleko inikwa i-3.000 yeedola ngokufumanisa eyona nto iphambili kwezokhuseleko kwiqonga elidumileyo leSlack.
ICloudFlare ivuza idatha yabucala kwi-1Password, Fitbit kunye ne-Uber kangangeenyanga
ICloudFlare iyavuma ukuba kangangeenyanga ezininzi ibinolwazi lweshishini oluyimfihlo kunye nedatha yomsebenzisi evezwe kuyo yonke i-intanethi.
Iintengiso ekugqibeleni zenza iividiyo zikaFacebook
I-Facebook iya kuthi ekugqibeleni ihambise i-55% yemali efunyenwe ngokufaka intengiso kwiividiyo kubabhali abafanayo.
I-Remix Ubunye buza kukuvumela ukuba uguqule iselfowuni yakho kwi-PC epheleleyo
I-Jide Technology ibeka ngokusesikweni i-Remix Ubunye, indlela elula yokuguqula isixhobo sakho sibe yikhompyuter epheleleyo kunye esebenzayo.
UGoogle uya kuvumela iinkqubo zakhe zobukrelekrele bokulinganisa ukuba zilungelelanise zonke iintlobo zewebhusayithi
UGoogle uxela ukuba inxenye yeenjineli zayo zisebenza kwinkqubo entsha yobukrelekrele bokukwazi ukufumana izimvo ezenzakalisayo.
IMicrosoft ibhengeza ukufika kohlaziyo olukhulu lwe Windows 10 ngasekupheleni kuka-2017
Ngexesha lenkomfa yokugqibela ebibanjwe nguMicrosoft safumanisa ukuba inkampani iceba ukukhupha uhlaziyo olutsha lwe Windows 10 le 2017.
Izikhundla zeWhatsApp sele zikhona eSpain
Ngale ntsasa sithethe ngomsebenzi omtsha ocwangcisiweyo wokucwangciswa kwemiyalezo ku-WhatsApp ...
Amazwe kwifomathi yevidiyo ngoku afika kuWhatsApp
I-WhatsApp isandula ukubhengeza ngokusesikweni uhlaziyo lweqonga ukuyilungiselela ukufika kwamazwe amatsha ngohlobo lwevidiyo
Uyikhupha njani imveli Windows 10 usetyenziso
Ukungena apho siza kuthetha khona ukuba izicelo zendalo zinokukhutshwa njani Windows 10 ngendlela elula kakhulu kwaye ekhawulezayo.